दाह्री पाल्नेलाई खुसीको खबर, यस्ता रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ, जान्नुहोस्! | सुदुरपश्चिम खबर
दाह्री पाल्नेलाई खुसीको खबर, यस्ता रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ, जान्नुहोस्!
अहिले युवामा दाह्री पाल्ने फेसन नै चलेको छ । केही फरक देखिन चाहनेहरूले आफ्नो दाह्री र जुँगालाई विभिन्न स्टाइल दिन सक्छन् । तर, कतिपय युवा चाहना हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अनुहारमा रौँ नआएर चिन्तित हुन्छन् । अनुहारमा रौँ बढाउन चाहनेलाई भारतीय हेयर क्लिनिककी डा। एस सरिनको सुझाब यस्तो छ ः
यसका साथै तनावलाई सकेसम्म टाढा नै राख्नुपर्छ । यसलाई कम गर्न योग गर्न सकिन्छ । यसको सकारात्मक प्रभाव चाँडै देखिन्छ र अप्रत्यक्ष रूपमा हेयर ग्रोथलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ । अनुहार सफा राख्न बिहान र बेलुका क्लिन्जर प्रयोग गर्न सकिन्छ । सातामा एक दिन एक्स्फोलियट गर्नाले छालामा रहेको मृत कोषिका बाहिर निस्कन्छ ।
दाह्री जुँगा पाल्नुको केहि बेफाइदा
धेरै मानिसको बानी आङ्खना दाह्रीजुँगा मुसारिरहने हुन्छ । यसरी दाह्रीजुँगामा हात लगाइरहने बानीका कारण दाह्रीका जीवाणुहरु हातमा सर्ने र त्यसपछि पुनः शरीरका अन्य भागमा फैलिने सम्भावना हुन्छ । साथै हात फोहोर रहेको भए हातमा रहेका जीवाणुहरु दाह्रीमा सर्ने र दाह्री मार्फत मुख र नाक हुँदै शरीरभित्र प्रवेश गर्ने जोखिम समेत हुन्छ ।
चीनमा दाह्री पाल्ने र अनुहार ढाक्न प्रतिबन्ध
साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।( urlabarinews.com बाट साभार )